FAQs - Shanghai Chunye Chishandiso Technology Co., Ltd.
Ndeipi mini yekuraira huwandu?
MOQ: kazhinji 1 unit / chidimbu / seti
Ndedzipi nzira dzekubhadhara dzinotsigirwa?
Nzira yekubhadhara: NaT / T, L / C, nezvimwe.
Mari yekubhadhara: Kazhinji, Tinogamuchira 100% T / T pamberi, chiyero pamberi pekutumirwa.
Ndedzipi nzira dziripo dzekuendesa?
Nzvimbo yedu yechiteshi: Shanghai
Kuendesa ku: Pasi Pose
Kununura nzira: negungwa, nendege, nerori, nekutengesa, kutakura zvifambiso
Inguva yakareba sei chigadzirwa chigadzirwa chekutakura pamwe?
Dhirivhari zuva rinosiyana neyechigadzirwa mhando, yekuraira huwandu, yakakosha chinodiwa etc. Kazhinji yedu hombe muchina dhirivhari zuva iri kutenderera 15 ~ 30 mazuva; bvunzo michina kana analyzer zuva rekutakura rakatenderedza 3 ~ 7 mazuva Zvimwe zvigadzirwa zvine stock, taura nesu chero nguva kuti uwane rumwe ruzivo.
Inguva yakareba sei iyo garandi nguva?
Isu tinopa mvumo kuti chirimwa chiwanikwe pasi pechibvumirano chakatemwa pamusoro pehurema hwezvinhu uye hunyanzvi pasi pekushandisa zvakajairika uye sevhisi kwenguva yemakore 1 mushure mekutanga kwechirongwa.
Akadii masevhisi masevhisi pane chigadzirwa?
Unogamuchirwa kuti utaure nesu chero nguva kana iwe uine chero technical technical. Isu tinopindura nekukurumidza uye kupindura kune kwako kugutsikana. Kana zvichidikanwa uye zvichidikanwa, Injiniya inowanikwa kunoshanda uye nekupa technical technical kune michina mhiri kwemakungwa.
Electromagnetic Kuitisa Inzwa, Quadrupole Graphite Kuitisa Shungu, Kufambisa TDS Sensor, Titanium Alloy Kuitisa Shungu, Chlorophyll Sensor, Ph Sensor Electrode,